“Tokkoyyuu Hintolle Budaan Lakkuu Deessi!” | QEERROO
Posted on January 3, 2018 by Qeerroo
namoonni gogaa Oromoo keessi habashaa gara gaaffii dimokiraasiitti dabsaa yoo jiran ilaalaa turre.
Gaaffii keenya halagaaf Gaangoon halagaan yaabbatee ittiin nutti dhugu yeroo kamuu kabajanii qixa sirna qabeessaan ilaalaa hinturre,
fuulduratti gaaffii keenya daddabsuu dhiisuun soba dubbiti. Har’a golli halagaan nyaatamee saatii bososaa jirutti daara baasuuf
bayyanachiisuurratti kanneen ganamaa galgala irriba dhabaa bulan maqaa Oromoo maxxanfatanii akkasuma maqaa hogganummaa uummata qabatanii utuu jiranii waan uummata keenya barnadeessuuf dhabamsiisuuf daandii saaqaa utuu jiraniis argaa jirra.
Araadni biraan eenyurraas eessattis nu qabe hinbeeku jechuuf araada Oromiyaa Bilisaaf walabaa sana dhibbaa dhibbatti akka qabnu namuu
beeka. Dheebuun keenyas waan dheebonne argachuun dheebuu baana malee waan dheebonne nurkatii rukutanii dhangalaasaa waan hinmalle nu
obaasuun dheebuu keenya nu hinbaasu. Beelas qabna beelli keenya guddan keenyarratti abbaa ta’uun yoom nama ofiin of bulchu taanaadha. Kanaan alatti hariiroo gaa’elaa qamaa biroo faanaa saatii kamiif akka hinfeeneef hinbarnaanne eenyullen cimsee beeka.
OPDO’n guyyaa guyyaan yakka jallataa oomishaa bulti. Yakkishee kaleessaayyuu utuu ishee abaarsisaa jiruu dabalataan yakkoota seenaaf
Seerri gaafatu dalaguuf guyyuu dhiphataa oolti. “Tokko dhuufuun namummaa lama dhuufuun Harrummaadha” jedhu. Kaleessa tarii beektees
utuu hinbeekinis dogoggoruun waanuma jiru. Yaa ta’uutii wanti umurii ishee guutuu uummata isheen akka nagaa dhabduuf abaaramtu dalagduuf
waan biraati. Kaleessa Gaangoo taatee halagaan yaabbatee Oromiyaa keessa ittiin shaaffadaa tureera. Har’as Gaangoo halagaa baatuuf
Harree ba’aa halagaaf baatu ta’uu ittuu jabeessuutti akka jirtu argaa jirra. Daandiin daandii dabaa akka ta’e namuu beeka. Akeekni ijaarama
isheetis lafa Oromoo ittiin saamuuf apbuuda Oromoo ittiin kan dhuunfaa taasifachuuf halagaan akka ishee bixxile matumtishee beekti.
Utuu kana hundaa haalaan jabeeasitee beektuu, yakkoota ulfaatoo kaleessa gochaa turteen uummanni Oromoo balaaleffataa utuu jiruu irraa
irratti dabalataan Hakka dalaguu irratti bobba’uun ishee egeree jireenya ofitti cuqqaaluu akka hintaaneen shakkaaf. Yeroo hedduu waan
obsee nama dhaggeeffatu caqasuun gaariidha. Qaamni obsa daneessu obsa fixannaan murtii keessa deebii hinqabne akka murteeffatu hubachuun
irraa eegama. Uummanni keenya OPDO akka mucaa daa’imaatti urursaa yoona ga’eera jechuun wal’aalummaaf kana gootiif nii barti nii
barsiifnaaf yakka ishee hedduu irra darbaa yoona gaheera. Haabadan kana booda Obsi sun waan dhumate fakkaata. Daa’imni wal’aalalaadha nii
bara jedhan dabaan guddatee ilma dabaaf jallina karoorsaa bulu ta’uutu argamaa jira.
OPDO’n uummata Oromoof balaa guddaa akka karoorsaa jirtu himamaa jira. Keessattuu ilma Oromoof Oromoo mana hidhaatti guuruu, Qeerroo adamsuun qabsoo dadhabsiisuuf Leenjiin akka walii isaanii kennamaa jirutu himama. Isa kana egaa ifgaaguruu isheeti jennee fudhanna. Budaan
tokkoyyuu hintollee lakkuu dhalti. OPDOnis yakka waggaa waggaan, ji’a ji’aan hmguyyaa gara guyyaatti dalaguu itti fuftee jirti. Egaan egeree
jireenyashee isheetu murteeffata jira jechuun fedha.